Landa i-De Havilland DHC5 Buffalo Forces Canadiennes FSX - Rikoooo
Play 16 335
Leli jubane elinamandla elinama-turboprop lisetshenziselwa kokubili ukusesha nokulondolozwa kwezindiza. I-ramp yangemuva ivula isimo sokudonsa umoya kanye nomhlabathi.
Ukulayisha umsebenzi / ukulayishwa komsebenzi.
Qedela iphakheji FSX, iphaneli, i-VC nemisindo yesiko. Qedela imodeli yezithombe ezindizayo, kufaka phakathi izisebenzi zezilwane.
Iyahambisana ne-Acceleration / SP2.
Isengezo ku-"rate rate rate", okusho ukuthi, silungele ukuhlelwa kwemidwebo emincane, ngoba wonke umuntu uyakwazi lokho FSX futhi (of) umenzi wesicelo.
Ekwazi ukwenza imisebenzi eminingi njengoba kukhonjisiwe ngenhla, le ndiza iyavumelana nesikhala sakho.